Freddie Ljungberg Sheekada Carruurnimada oo lagu daray Xaqiiqda Taariikh Nololeedka ee Untold
Home YURUB IYO YURUB Freddie Ljungberg Xaqiiqda Carruurnimada Untold Biography Xaqiiqda
Freddie Ljungberg Sheekada Carruurnimada oo lagu daray Xaqiiqda Taariikh Nololeedka ee Untold. Credits Image: Matt Bunn (DailyMail) iyo ArseWeb
LB wuxuu soo bandhigayaa sheekada dhamaystiran ee kubadda cagta oo leh naanaysta "Freddie". Our Freddie Ljungberg Sheekada Carruurnimada Sheeko Dheer Untold Biography Xaqiiqooyin ayaa kuu keenaya xisaab buuxa oo ah dhacdooyin caan ah laga soo bilaabo waqtigiisa caruurnimada ilaa taariikhda.
Noloshii iyo Kacitaanka Freddie Ljungberg. Dhibcaha Sawirka: TheSunUK, DailyMail iyo ArseWeb
Haa, qof walbaa wuu ogyahay inuu kanas ka horeeyey Halyeeyga Arsenal iyo moodada dharka labiska kuwaas oo waqtiga qorista, wuxuu noqday macalinka kumeel gaarka ah ee kooxda Arsenal kadib Unai Emery's jooniska. Si kastaba ha noqotee, kaliya tiro yar oo ka mid ah taageerayaasha kubbadda cagta ayaa tixgeliya qaabkeenna Freddie Ljungberg's Biography oo ah mid aad u xiiso badan. Hadda bilaa camal dheeraad ah, aan bilawno.
Freddie Ljungberg Sheekada Carruurnimada oo lagu daray Xaqiiqda Taariikh Nololeedka ee Untold - Asalka Qoyska iyo Nolosha Hore
Bilaabidda, magacyadiisa buuxa waa Karl Fredrik “Freddie” Ljungberg. Freddie Ljungberg sida loogu yaqaanay wuxuu ku dhashay maalinta 16th ee bisha Abril 1977 hooyadiis, Elisabeth Bodil Ljungberg iyo aabihiis, Roy Alve Erling Ljungberg, oo ku nool Sweden, Galbeedka Yurub.
Freddie wuxuu asalkiisu ka soo jeedaa degmo yar oo iswiidhish ah oo la yiraahdo Vittsjö (Dadka deggan 1,665 ee ku nool 2010). Wuxuu ku qaatay sanadihii ugu horreeyay ee 4 noloshiisa meeshuu ku dhashay ee quruxda badneyd ee Vittsjö isaga iyo waalidkiis iyo cunugga walaalkiis oo la magacaabay Karl Oskar Filip Ljungberg.
Freddie Ljungberg wuxuu cimrigiisii ​​hore ku qaatay Vittsjo. Dhibcaha: QX Sveriges största Gaysajt
Vittsjö waa degmo qurux badan oo iswiidhish ah oo caan ku ah taariikhda in ay ahaato goob dagaal oo udhaxeeya Denmark, Norway & Sweden oo u halgamey sheegashadeeda. Ma ogeyd?… Waxay ku jirtay biyaha Vittsjö oo caleemo saaray Boqorka Sweden Gustavus Adolphus kudhowaad ooday intaad ka laabaneysay deenishka, ciidamada. Hadda, taasi waa mid ku filan taariikhda !!
Taariikhda Qoyska: Freddie, si ka duwan Zlatan, ayaa nasiib u yeeshay in uu ka soo koray asal qoys heer sare ah. Ma ogeyd?… Aabihiis Roy Alve Erling waa Injineer madaniga ah oo hodan ah oo markii dambe qaatay lahaanshihiisa dhismihiisa iyo la taliyahiisa ganacsiga. Hooyooyinka Freddie Ljungberg hooyadeed Elisabeth Bodil Ljungberg ayaa iyaduna door weyn ka ah waaxda shaqada ee dalka Iswiidan.
Ka dib markii ay ku noolaayeen sannadihii Vittsjö 5, sanadka 1982, waalidiinta Freddie Ljungberg waxay ka baxeen degmada si ay u deggaan Halmstad, oo ah magaalo hodan ah oo ku taal afka wabiga Nissan, xeebta galbeed ee Sweden. Dadaalka qoyska ee ah inuu ka tago Freddie meesha uu ku dhashay ee Vittsjö si hagaagsan ugama aysan dhamaan Freddie Ljungberg. Ilmaha qarniga xasaasiga ah ee 5 oo si aad ah jacayl ugu dhexjiray meeshuu ku dhashay ma uusan dooneynin in qoyskiisa oo dhami ay ka baxaan magaalada Halmstad. Wuxuu ku dooday waalidkiis hodanka ah oo aan arkin sababa badan oo go'aankiisa ah inuu gadaal ka joogo. Waxay ka xireen Vittsjöall ilaa Halmstad. Mar dambe noloshiisa, Freddie wuxuu xaqiiqsaday magaalada Meesha uu masiirkiisa la dhigay
Ka tegitaanka Vittsjo ee magaalada weyn ee Halmstad waxay ahayd go'aankii ugu fiicnaa waaliddiinta Freddie Ljungberg ee isaga u sameeyay. Astaanta Sawirka: Pinterest
Freddie Ljungberg Sheekada Carruurnimada oo lagu daray Xaqiiqda Taariikh Nololeedka ee Untold - Dhismaha Waxbarashada iyo Xirfadaha Shaqada
Halmstad waxay ahayd magaalo jecel oo iswiidhish ah oo sifiican ugu haboon Bowling, golf, jimicsiga, kubbada cagta, dabaasha, teniska, hockey barafka, cricket iyo ciyaaro kale oo badan. Intii iskuulka lagu jiray aIlmahaagu, Freddie wuxuu horumariyey hibo kubbadda gacanta ah. Waxay gaadhay heer markii kartidiisa kubadeed ay aqoonsadeen kooxda kubadda gacanta qaranka ee Sweden, horumarin ayaa u aragtay Freddie loogu yeeray inuu matalo dalkiisa. Si la yaableh, wuu diiday dalabkaas isagoo ku adkeystay in xiisihiisu uu yahay kaliya kubada cagta.
Freddie Ljungberg Sannadihii Hore - Kaliya iskama hor istaagi karo kubbada cagta, isagoo ka dhex doortay dhamaan ciyaaraha. Astaanta Sawirka: Instagram
Freddie iskama hor istaagi karo kubada cagta xulashooyinka kale ee isboorti. The cunuga hodanka ah wuxuu awooday inuu isku dheelitiro inta udhaxeysa kubada cagta iyo inuu helo dhibco wanaagsan.
Freddie Ljungberg Sheekada Carruurnimada oo lagu daray Xaqiiqda Taariikh Nololeedka ee Untold - Nolosha Mudnaanta Hore
Freddie Ljungberg's walidiintu waligood kama qoomameeyaan dadaal si ay u arkaan wiilkooda oo dhammaystira riyooyinkiisa isboorti. Waxay ku taageereen himiladiisa ah inuu helo waxbarashada kubbadda cagta Halmstads BK halkaas oo uu si guul leh ugu diiwaangeliyay kooxda da 'yarta kooxda oo uu tababaray Olle Eriksson.
Freddie Ljungberg sanadihii hore ee Halmstad. Dhibcaha: Arseweb
Freddie Ljungberg wuxuu ahaa mid dhaqso badan oo fikrad kooxda la soo sameeyay. Wuxuu soo jiitay macalinkiisii ​​dhalinyarada Eriksson oo mar yiri wiilka ayaa si cajiib ah karti u leh da'diisa. Xiddiga Iswidishka ku dhashay wuxuu ahaa mid aad u wanaagsan inuu mararka qaarkood tixgelin siin doono ciyaartoy kale iyo dhowr jeer, xitaa kuwa ka soo horjeedda. Ma ogeyd?… dhalinyarada Ljungberg ee uu magnanimity mararka qaar kubbada ayay u dhaafin lahaayeen saaxiibadiisa si ay fursad ugu helaan inay wax dhaliyaan.
Markii uu jiray da'da 12 ee sanadka 1989, wuxuu horey u arkaayay inuu yahay mustaqbalka kubada cagta Sweden. Si uu ugu dhaqaaqo Fastrack horumarkiisa, Freddie wuxuu isku dayay inuu ka dhaadhiciyo Halmstads BK inuu isaga dhaqaajiyo laba talaabo kor u qaadida darajooyinka dhalinyarada (laga bilaabo p12 illaa p14) kaas oo ka soo horjeeday siyaasada naadiga waqtigaas.
Ljungberg intii uu kubada cagta la ciyaarayay Halmstads BK sidoo kale wuxuu ku jiray darajada ugu sareysa ee waxbarashadiisa. Wuxuu ku fiicnaa maadooyinka tacliinta, isagoo dhammeeyay fasalka 9. Ma ogeyd?… Darajadiisa dugsiguba waxay ku muujinayaan iskucelcelis 4.1 qiyaasta 5-dhibic.
Freddie Ljungberg Sheekada Carruurnimada oo lagu daray Xaqiiqda Taariikh Nololeedka ee Untold - Waddada loogu talagalay sheekada
Ma uusan noqon karin Jack of Trades oo dhan: 18, Ljungberg waxaa horeyba loogu qabtay dugsiga sare wuxuuna qarka u saarnaa inuu soo afjaro kubbada cagta dhalinyarada. Xitaa adigu waxay ahayd dhibic noloshiisa ah oo dalbatay in feejignaan la siiyo hal xirfad, Ljungberg xoog badan ayaa weli doonayey inuu sii wado labadaba waxbarashada jaamacadda iyo kubbadda cagta sare. Xaqiiqdii, wuxuu qaatay jaamacadda halkaas oo uu ku bilaabay waxbarashadiisa tikniyoolajiyada macluumaadka iyo dhaqaalaha.
Si dhakhso ah, Ljungberg wuxuu bilaabay inuu xiro. Wuxuu ogaaday inuusan ahayn qof bini aadam ah oo diirada saari kara culeyska jaamacadeed iyo kubada cagta sare isku mar. Wuxuu dhowr jeer ku dhibtooday inuu dheelitiro dheelitirka u dhexeeyo jadwalkiisa waxbarasho ee halista ah ee jir ahaan dalbanaya ka go'naashaha ahaanshaha cayaaryahan xirfad leh. Ka dib markii uu la tashaday xubnaha qoyskiisa, kalkaalisaduhu waxay go’aansadeen inay ka baxaan jaamacadda si ay xoogga u saaraan kubbadda cagta.
Ljungberg markii uu ka baxay waxbarashadiisa jaamacadeed wuxuu u sii gudbay safarkiisii ​​ugu horeeyey ee 23 October 1994. Sannad-guuradii ugu horreysay ee xirfadiisa ciyaareed, Iswidishka kartida leh wuxuu bilaabay inuu soo jiito madaxdiisa. Wuxuu u sii waday inuu ka caawiyo Halmstad inuu ku guuleysto Svenska Cupen ee 1995 iyo Allsvenskan (Horyaalnimada horyaalka iswiidhishka) ee sanadka 1997.
Freddie Ljungberg ayaa ku guuleystay qalbiyada tababarahooda intii uu ku sugnaa Halmstad. Astaanta Muuqaalka: Flickr
Freddie doorkii cajiibka ahaa ee uu ku guuleystey horyaalnimada xirfadeed ee iswiidhan wuxuu arkay kooxo badan oo ajnabi ah; kooxaha sida Barcelona, ​​Aston Villa, Parma iyo Arsenal ayaa dhamaantood ka baryaya saxiixiisa.
Freddie Ljungberg Sheekada Carruurnimada oo lagu daray Xaqiiqda Taariikh Nololeedka ee Untold - Kusoo sharax sheekada
Dhamaan tababarayaasha dhexdooda, waxay ahayd Arsene Wenger, (borofishanka caqliga leh) ee qaaday tallaabada aan caadiga ahayn ee oggolaanshaha saxiixa Freddie (£ 3m) xitaa isaga oo aan arkin isagoo nool. Wenger kaliya wuxuu TV-ga ka daawaday Ljungberg laakiin wuxuu ka naxay aragtidaas wiil timo guduudan oo casaan ah yaa u muuqday Johnny Rotten ku biirista kooxdiisa.
Ljungberg wuxuu ahaa kii ugu fiicnaa waddankiisa (Sweden) ka hor inta uusan midabbada ugu noqon shaatooyinka Arsenal. Dhibcaha: Flickr & Picuki
Ljungberg marna iskuma muujin inuu ku dhibtooday Arsenal dhib la'aan maadaama uu isla markiiba bilaabay inuu duulo baalashihii Highbury. Waqti kama qaadin kahor intuusan waalinku dhiirrigeli kooxdii naadiga. Freddie wuxuu ku raaxeystay wada shaqeyn aad u wanaagsan oo lala yeesho Thierry Henry iyo tiro badan oo kale oo caan ah isla markiiba laga soo bilaabo markii uu ku biiray kooxda.
Freddie Ljungberg wuxuu shuraako weyn la lahaa Thierry Henry waqtigiisii ​​Arsenal. Astaanta Sawirka: mareegta
Freddie waqtigiisii ​​ugu fiicnaa ee Arsenal wuxuu yimid markii uu ka caawiyay kooxda inay ku guuleystaan ​​horyaalkoodii labaad ee Premier League iyo FA Cup iyo sidoo kale, isagoo qeyb ka ah Arsenal '2003-04'Kaqaybgal'Squad, Tan ka sii muhiimsan, wiilka dahabiga ah ee Arsenal wuxuu noqday rikoorka heysta abaalmarinta XilliX / 2001 Premier League ee abaalmarinta xilli ciyaareedka.
Freddie Ljungberg waa kii ugu sarreeyay ee awoodiisa Arsenal. Dhibcaha Sawirka: arsenalpics, Rasmi ah iyo PL25yeer
Waqtigii uu fariistay, halyeeyga Arsenal wuxuu ku guuleystay qadka dhexe ee reer Sweden sanadka 5 jeer oo isku xigta (2001, 2002, 2003, 2004, 2005). Wuxuu sidoo kale ku guuleystay ciyaaryahanka sannadka ee Sweden (2002 & 2006) waxaana lagu meeleeyay '11th' ee Arsenal.com ee Ciyaartoyda Ugu Weyn 50 Cayaartoy.
Kadib hawlgabnimadiisii, jacaylka Ljungberg ee jacaylka waxbarashadu wuxuu arkay isaga oo ku qaadanaya tababarka tababbarka halkaas oo isaguna si heer sare ah u gaadhay. Markay ahayd 12 Luulyo 2016, wuxuu ku biiray Akademiyada akadeemiga ee Arsenal isagoo tababarayay naadiga 'Under-15s'. Sirdoonka Ljungberg wuxuu arkay inuu horumar ku sameynayo mustaqbalkiisa tababarenimo isagoo wata kaaliyaha VfL Wolfsburg (2017), Arsenal U23 iyo tan ugu xiisaha badan, isagoo noqday macalinka ku meel gaarka ah ee Arsenal 29th ee November 2019. Inta kale, sida ay yiraahdaan, hadda waa taariikh.
Freddie Ljungberg Sheekada Carruurnimada oo lagu daray Xaqiiqda Taariikh Nololeedka ee Untold - Nolosha Xiriirka
Laga bilaabo sanadka 2000, Freddie wuxuu bilaabay inuu yeesho cilaaqaad iyo inuu la kulmo marwada. Intii u dhaxeysay 2000 illaa 2008, waxaa lagu yaqaanay inuu lahaa saaxiibbada 8 saaxiibbadood oo kala ah; (1) Stephanie Saunders (2000), (2) Denise Lopez (2002 - 2003), (3) Lauren Dahab (2004 - 2005), (4) Madeliene Lexander (2005), (5) Louisa Lytton (2006), (6) Gia Johnson (2007), (7) Jamie Gunns (2008) iyo (8) Natalie Foster (hadda xaaskiisa waqtiga qoraalka).
Freddie wuxuu lahaa cilaaqaadyo wuxuuna la kulmay mudanayaal 7 ah kahor inta uusan degin. Dhibcaha: WhoDatedWho
Freddie wuxuu la kulmay jacaylka noloshiisa Natalie Foster (Maya: 8) 2007, sanadkii uu ka tagay Arsenal kuna biiray Westham. Gabadha saaxiibada ah ee markii dambe noqotey naag sidoo kale waxay ka timid guri hodan ah. Ma ogeyd? Natalie waa gabadha shirkad fulisa shirkada caanka ku ah London Daryl Foster. Sida Freddie, iyaduna waa a 'socialite- oo caan ku ah bulshada moodada Ingiriiska ah.
Sugitaanka dheer ka dib, halka shukaansi, labada shimbirood ee jacaylka ay go’aansadeen inay isguursadaan 9th ee Juun 2014, xaflad ka dhacday hore ee Madxafka Taariikhda Caannimada, London.
Freddie Ljungberg Sawirka arooska oo ay la socoto Natalie Foster. Astaanta Sawirka: Instagram
Freddie iyo Natalie labaduba way soo dhoweeyeen laba caruur ah Aria iyo Billie Ljungberg guurka kadib.
Freddie Ljungberg Sheekada Carruurnimada oo lagu daray Xaqiiqda Taariikh Nololeedka ee Untold - Naftaada Shaqsiga
Inaad baratid Freddie Ljungberg Nolosha Qofka waxay kaa caawin doontaa inaad sawir wanaagsan ka hesho shakhsigiisa ka fog kubbadda cagta. Ljungberg wuxuu mar qudha isu muujiyey sida tusaale, waana xirfad uu jecel yahay inuu ku biiro kubada cagta. Waqtigaas ka dib, wuxuu qaabeeyay dhammaan noocyada jirka iyo dharka labiska ee kooxda Calvin Klein.
Freddie Ljungberg Nolosha Shaqsiyadeed ee ka fog kubada cagta- Mar wuxuu caan ku noqday Modeling. Dhibcaha:imdb, TheSun iyo Pinterest
Ma ogeyd?… Lahaanshaha astaamaha jirka; cool chiseled abs, dhabannada sare, iyo muuqaalka muuqaalka ayaa muujiyey dumar aad u fara badan isaga oo dhan, waana sabab uu xiriiro badan u lahaa muddadii uu joogay Arsenal. Isaga oo ka hadlaya khibradaha ay la leeyihiin marwada muddadii uu ku gudajiray moodalka, ayuu Freddie mar u sheegay wargeyska Iswidishka Di (Warbixinta Sun);
“In kasta oo ay u egtahay wax qatar ah aniga iyo anigu, ma cadeyn doono. Tusaale ahaan…, Markaan aado naadiyada habeenkii, gabdhaha ayaa imaan lahaa oo qabsan lahaa fankayga 'tch'. Waa sidaa oo kale!!!. Haa! Meel kasta ayay ka dhacaysay. Mararka qaar, gadaal ayey ka soo socdaan, dhinac ayey iiga jiidaan oo way i garaacayeen. Qaybta ugu xumaa waxay ahayd inaanan sameyn karin wax xun oo arintan ku saabsan. Markii aan xanaaqay gacmahooda, ayaa dadku qosleen oo keliya. ”
La yaab maleh, Freddie waxaa loo aqoonsan yahay Ingriiska se * iest kubada cagta waxaa sabab u ah xirfadiisa qaabeynta moodada.
Freddie Ljungberg Sheekada Carruurnimada oo lagu daray Xaqiiqda Taariikh Nololeedka ee Untold - nololeedka
Barashada qaab nololeedka Freddie Ljungberg waxay kaa caawineysaa inaad hesho sawir buuxa oo ku saabsan heerka noloshiisa. Shaki la’aan, Ljungberg waa nin taajir ah - nasiib wanaagna lagu qiyaasay inuu ku dhowaad yahay £ 8m. The nin qabow ayaa si weyn looga yaqaanaa Waqooyiga London oo dhan qaab nololeedkiisa qalaad, mid si fudud looga arki karo baabuurtiisa jilicsan.
Gaariga Freddie Ljungberg wuxuu muujinayaa inuu ku nool yahay nolol aan caadi aheyn. Astaanta Sawirka: Instagram
Halyeeyga Arsenal ayaa dhowr jeer lagu arkay, isagoo dhex maraya waqooyiga London Ferrari 360 Spider, kaas oo wata qiimaha qiimaha oo ku dhow £ 85,000- £ 90,000. Sidoo kale waa la arkay (sanadkii 2013) isagoo fadhiya booska Range Rover isagoo cunaya saxan cunto oo ay weheliso eeygiisa, Amadeus.
Freddie Ljungberg wax dhib ah kuma lahan inuu casho ku dhex helo Range Rover. Dhibcaha: TheSun
Ciyaartoyda Kubadda Cagta, sida qaarkeen oo kale, way jecel yihiin xayawaankeena xayawaannada ah, Freddie-na ma aha wax laga reebayo. Xitaa adigu waxaa jira odhaahd ah inaysan jirin wax daacada ah oo ka hadhay ciyaarta casriga ah, dhab ahaan ma tixgelinayso xiriirka ka dhexeeya Freddie iyo eey, Amadeus. Sawirka hoose wuxuu soo koobaya qaab nololeedkiisa Freddie. Waxa uu ku seexday hurdo yar kadib markii uu u dabaaldegay mid ka mid ah dhalashadiisa dhalasho ee hore.
Freddie Ljungberg wuxuu ku seexdaa beertiisa quruxda badan isaga iyo saaxiibkiis Amadeus.
Freddie Ljungberg Sheekada Carruurnimada oo lagu daray Xaqiiqda Taariikh Nololeedka ee Untold - Xaqiiqooyin aan sax ahayn
Freddie Ljungberg Tattoos: Ma ogeyd?… Freddie wuxuu ka mid ahaa jiilkii kubbadda cagta ee bilaabay inay qabsadaan fanka jirka dhammaadkii 90s iyo horraantii 2000s. Waqtigaas ka dib, Iswidishku wuxuu jecel yahay inuu ku sawiro santuuqa bisadiisa madow ee sinta miskihiisa inta uu la jilayo surwaalkiisa. Taatikadaan oo loogu talagalay Los Angelos ayaa la sheegay inuu qaatay sideed saacadood si uu u dhammeeyo. Sida hoos ku xusan, wuxuu kaloo leeyahay sawir kale oo loo yaqaan LA oo loogu talagalay tattoo kaas oo ku muujinaya diintiisa (Masiixiga) gacantiisa.
Freddie Ljungberg Tattoo & Cudur cudur ah. Astaanta Sawirka: TheSun
Wuxuu mar tuhunsanaa inuu qabo HIV-AIDS: Qiyaastii 2005, Freddie wuxuu bilaabay inuu seego ciyaaraha muhiimka ah sababtuna tahay dhaawaca joogtada ah ee sinta. Kadib markii uu ka shakiyay in uu ku dhacay cudurka, waxa uu maray tijaabooyin isdaba joog ah (oo ay ku jiraan aids iyo kansar) si loo ogaado sababta dhibaatooyinkiisa. Si la yaab leh, waxaa lagu ogaadey inuu jawaab celin dhif ah ka qabo mid ka mid ah tattooskiisa. Freddie wuxuu sameeyay qalliin sinta si looga saaro qanjidhada bararsan jirka. Erayadii uu yidhi thesun;
Waan baqay. Dhowr jeer baa la I baaray, laakiin qofna ma jirin, xitaa aniga qudhaydu waxay umuuqdeen inay ogyihiin waxa aniga igu qaldan.
Aad baan u walwalay. Ma dareemin xanuun ama jirro, laakiin dabcan, waan ogaa inaan gudaha ku dhaawacmay. Aakhirkii, dhakhaatiirtu waxay ogaadeen inay wax ku jiraan tattoos -kayga. Waan ka xumahay inay xalliyaan dhibaatada… waan fiicanahay hadda. ”
Magaca Nicklas Freddie Ljungberg: Ma ogeyd?… Kahor inta uusan u dhaqaaqin inuu sii wato kubbadiisa cagta England, waxaa lagu yaqaanay “Karl Fredrik Ljungan ” iyo MA “Freddie Ljungberg". Si kastaba ha ahaatee, intii uu u ciyaarayay Arsenal, waxaa la siiyay magaca naaneysta 'Freddie,, Magac si dhif ah loogu isticmaalay waddankiisa Sweden.
Khamaar XBox ah: Freddie waa qof ay u badan tahay inaadan aqoonin inuu yahay khamaariye. Kubadda cagta wuu ka fog yahay, wuxuu jecel yahay in lala joogo saaxiibkiis wanaagsan Ruud Gullit (macalinkii hore ee kubada cagta ee Dutch-ka iyo kubbadda cagta). Labada saaxiibba ma jecla wax ka badan inay lumiyaan saacado kooban FIFA ciyaaraha Xbox halka ay ku sii jeedaan meelaha lagu ciyaaro.
Freddie ma jecla wax aan ka ahayn inuu soo qaato Xbox xakameeyaha ka dhanka ah saaxiibkiisa wanaagsan- Ruud Gullit. Amaah- Twitter
Diiwaannada Qaranka: Ma ogeyd?… Ljungberg ayaa ahaa ciyaartoygii ugu horreeyay ee gool ka dhaliya finalka FA Cup ee ka baxsan England. Waxa kale oo uu noqday ciyaartoygii ugu horreeyay ee ku jira 40 sano oo dhaliya goolal isku xiga oo xiriir ah FA Cup. Isku soo wada duuboo, wuxuu heystaa naadiga 9 iyo 16 shaqsiyaad sharaf ku leh magaciisa. Hoos ka daawo sharfida xirfadiisa ee hoos ku xusan.
Freddie Ljungberg Naadiga iyo Maamuusayaasha Shakhsiyadeed. Dhibcaha: Wikipedia iyo ArsenalNews
Freddie Ljungberg Sheekada Carruurnimada oo lagu daray Xaqiiqda Taariikh Nololeedka ee Untold - Nolosha Qoyska
Freddie si dhif ah ugama hadlo ama u soo bandhigo waalidkiis ama xubnaha qoyskiisa warbaahinta. Sidaa awgeed ayaa loo malaynayaa in aabihiis iyo hooyadiis ay hadda ku nool yihiin deegaanka Halmstad ee qaniga ku ah Sweden halkaas oo uu ka bilaabay kubbadda cagta. Waxay u egtahay, waxay sidoo kale u muuqataa dhammaan xubnaha qoyska oo uu ku jiro walaalkiis Karl Oskar Filip Ljungberg leeyihiin wuxuu sameeyey go'aan xasaasi ah oo ah inuusan dooneynin aqoonsi dowladeed.
Markii ugu dambeysay ee warbaahintu qabsato qoyskiisa waxay ka badan tahay toban sano ka hor, waqtigaas oo aabihiis uu xoogaa dhibaato galay. Si sax ah 19th of July, 2008, Freddie Ljungberg aabihiis waxaa lagu eedeeyay r * pe iyo se * ual kadeedis. Tani waxay ahayd war xun oo kiciyay halyeeygii kooxda Arsenal.Warbixinta TheMirror 2008). Roy ayaa lagu qabtay guriga qoyska ee Sweden waxaana uu sedex habeen ku qaatay xabsiga booliska ee Halmstad kahor inta aan la sii deyn.
Hantida FACT: Waad ku mahadsan tahay akhriskayaga sheekada 'Freddie Ljungberg's Childhood Story Plus Xaqiiqda Untold Biography. Ugu LifeBogger, waxaan ku dadaalnaa saxsanaan iyo cadaalad. Haddii aad hesho wax aan sax ahayn, fadlan nala wadaag adigoo faallo ka bixinaya xagga hoose. Waxaan markasta qiimeyn doonnaa oo xushmeyneynaa fikradahaaga.
Taariikhda Kubadda cagta ee Iswiidhishka
Isaaq Isaaq Carruur Sheeko Xeeldheer
YURUB IYO YURUB333
Andy Carroll Story Story Plus Xaqiiqooyinka looyaqaano Weriyeyaasha
Alex Oxlade Chamberlain Sheeko Xeeldheer Xogta Warka Xadidan
Pierre-Emerick Aubameyang Storyhood Plus Sheekooyinka Xaqiiqooyinka aan la qorin
Waxaa laga yaabaa 1, 2017